मास्क : नेपालमा उत्पादन छैन, बाहिरबाट आउँदैन – Health Post Nepal
२०७६ फागुन २५ गते १७:३९
विश्वव्यापी महामारीकै रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड १९) ले नेपालमा पनि त्रास फैलाइरहेको छ। यो त्राससँगै बजारमा अभाव पनि सुरु भएको छ।
बजारमा सबैभन्दा बढी अभाव मास्कको छ।
बजारमा बढेको मास्कको माग नेपाली उद्योगले थेग्न सकिरहेका छैनन् भने पसलहरुमा भएका मास्क पनि व्यापारीले लुकाउन थालेका छन्। सिमितमात्रामा भेटिने मास्कको मूल्य पनि ह्वात्तै बढाइएको छ।
आयात सिमित, २ रुपैयाँ पर्ने मास्कलाई ३८ रुपैयाँ
यसअघि भारत र, चीनबाट मासिक करिब ८ देखि १० लाखसम्म मास्कको आयात हुन्थ्यो।
चीन र भारतले अहिले सर्जिकल सामग्रीको निर्यात निकै सिमित गरेका छन्। तयारी मास्कलगायत मास्क उत्पादनका लागि कच्चा पदार्थ आउने भनेकै चीन र भारतबाटै हो।
भारत र चीन सरकारले निर्यात सिमित गरेपछि त्यहाँका व्यापारीहरुले भने मास्कको मूल्य एकाएक बढाएका छन्। साधारणतया २ रुपैयाँ पर्ने मास्कलाई अहिले नेपालका व्यापारीहरु पनि ३८ रुपैयाँभन्दा धेरै तिरिर ल्याइरहेका छन्। त्यही मास्क नेपाली बजारमा अझैं बढाएर बेच्ने गरिएको छ।
केमिकल एन्ड मेडिकल आपूर्तिकर्ता संघका अध्यक्ष सुरेश घिमिरेका अनुसार भारतले बेला बेलामा नाकाबाट सामान ल्याउन दिएको छ तर, त्यो पनि निधै धेरै मूल्यमा।
चीनबाट आउने सामान नाकामै ‘क्वारेन्टाइन’मा राखिएको छ।
घिमिरे भन्छन्,‘अहिले बाहिरबाट आउने स्वास्थ्य परीक्षणका उपकरण र रसायनहरु ल्याउनै सकिएको छैन।’
नेपालमा मास्क उद्योग नै न्यून
नेपालमा मास्क उत्पादन गर्ने उद्योगहरु निकै कम छन्। साना ठूला गरी ३, ४ वटामात्रै उद्योग यहाँ छन्। काठमाडौं उपत्यकामा सजिकर्ल मास्क उत्पादन गर्ने २ वटा उद्योग छन्। त्यसैगरी कपडाको मास्क बनाउने उद्योग एउटामात्रै छ।
केही समयअघिसम्म नेपालमा दैनिक लगभग १० हजार सम्म मास्क उत्पादन हुन्थ्यो। तर, कति मास्क उत्पादन हुँदै आएको छ भन्ने तथ्याङ्क सरकारसँग पनि छैन। न आयातको यकीन विवरण नै छ। अहिले तिनै उद्योगहरुले २०देखि ३० हजार सम्म दैनिक मास्क उत्पादन गरिरहेका छन् तर, पनि बजारमा भने अभाव उस्तै छ।
नेपालमा किन उत्पादन हुनसक्दैन?
मास्क बनाउनका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ अहिले आउन छोडेको छ। ती कच्चा पदार्थ भारत र चीनबाटै आउने हो। अहिले दुबै देशले निर्यात निकै सिमित गरेका छन्।
कच्चा पदार्थ नै नभएपछि नेपालमा उत्पादन गर्ने मेसिनको क्षमता भएपनि उत्पादन गर्ने नसकेको घिमिरेको भनाइ छ।
खासगरी सर्जिकल मास्कको अभाव अहिले बजारमा पूरै चुलिएको छ। यो मास्क बनाउनका लागि फेब्रिक(नीलो वा सेता), फिल्टर, इलास्टिक इयर लुप तथा नोज वायर जस्ता कच्चा पदार्थ चाहिन्छ।
तर, यी कच्चा पदार्थबिना बनाइएको साधारण मास्क भने त्यत्ति प्रभावकारी हुँदैन। चिकित्सकीय दृष्टिकोणअनुसार सर्जिकल मास्क अलि बढी प्रभावकारी हुन्छ।
‘यसरी अभावका बीचमा नेपालमै उत्पादन गरिएको मास्कको मूल्य पनि निकै बढी नै पर्न जान्छ’ घिमिरे भन्छन् ‘मास्कका लागि बाहिर देशकै भर पर्नुभन्दा अर्काे उपाय अहिले छैन।’
सरकारले कारबाही गरेपनि रोकिएन कालोबजारी
बजारमा मास्कको अभाव र कालोबजारी बढ्दै गएपछि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले दैनिक बजार अनुगमन गरिरहेको छ।
अहिलेको बजार अनुगमन मेडिकल क्षेत्रमा केन्द्रित बनाएको विभागले जनाएको छ। तर, कालोबजारी भने अझै रोकिएको छैन।
सर्जिकल मास्क, सेनिटाइजेसनलगायत वस्तुको पनि बजारमा अभाव छ।
सरकारले दुई महिनालाई चाहिने मास्क मौज्दात रहेको बताएपनि बजारमा मास्कको अभाव देखिन्छ । काठमाडौं उपत्यकाका अधिकाशं फार्मेसीमा ‘यहाँ माक्स छैन’ भन्ने लेखिएको भेटिन्छ। तर, बजारमा कति मास्क छ? यकीन तथ्याङ्क न सरकारसँग छ, न व्यवसायीहरुसँग।
महँगोमा बेचेको वा लुकाएको पाइए ११३७ नम्बरमा खबर गर्न विभागले सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ।
बजारमै सर्जिकल मास्कको अभाव बढेको फार्मेसीमा काम गर्ने कर्मचारी बताउँछन्। ‘कोरोना भाइरसको नाम नसुनिएका बेला सर्जिकल मास्क दिनमा २०–२५ वटासम्म बिक्री हुन्थ्यो’
सरकारी फार्मेसीका एकजना कर्मचारीले भने, ‘अहिले दैनिक १००–१५० वटासम्म बिक्री हुन्छ।’